शुक्रबार, ०५ कार्तिक २०७८, ०६ : ०४
‘मलाई फिल्म अफर गर्नुभन्दा अगाडि सोचून्’
पर्दामा फरक–फरक भूमिका खोज्न रुचाउँछिन्, अभिनेत्री बेनिशा हमाल । आरजे, भिजेहुँदै उनी फिल्म ‘स्वर’बाट अभिनयमा प्रवेश गरेकी थिइन् । ‘मोक्ष’ र ‘कालोपोथी’ फिल्ममा उनले गरेको अभिनयले प्रशंसा पाएको थियो । उनी अभिनित ‘झ्यानाकुटी’ मंसिर १ गतेदेखि प्रदर्शन हुँदैछ ।
गत साताबाट फिल्म नगरीमा नयाँ हिरोइन भित्रिएकी छन्– दीपिका प्रसाईं । हलमा प्रदर्शनरत फिल्म ‘ऐश्वर्य’मा गरेको अभिनय र सुन्दर ‘लुक्स’का कारण उनी अहिले सबैको चासोमा परेकी छन् । उनी यसअघि मोडलिङमा सक्रिय थिइन् ।
लोक दोहोरी गायक पुरुषोत्तम न्यौपाने चलेको नाम हो । श्रीखण्ड चन्दन, फूलको वासना, ऐना हेरेर, झिलभिल सितारा, मिर्मीमुनि काली थुनेको, रुन्छ नि मन किन रुँदैन, सरर पानी घट्टमा, घामजस्तो चम्किलो जुन हुँदैन’, ‘म त हिँडे पोखरा माया हिँड्यो दाङको बसैमा’, ‘ढुङ्गेधारामा’ लगायतका उनका लोकदोहोरी चर्चित छन् ।
‘फिल्म चलेन भने यो क्षेत्रै छाड्छु’
फिल्म चलेन भने चाहिँ मेरो विश्वासमा कुुठराघात हुुन्छ । म आफूलाई फिल्म इन्डस्ट्रीमा रहनुको कुनै अर्थ छैन भन्ने महसुस गर्छु । मैले यति गर्दागर्दै पनि दर्शकले किन तिरस्कार गर्नुभयो भन्ने प्रश्नचाहिँ रहिरहन्छ । मैले आफ्नो १०० पर्सेन्ट दिँदा पनि फिल्म चलेन भने मैले फेरि किन बनाउने ? कहाँबाट पैसा ल्याएर बनाउने ? म भयंकर पैसावाला मान्छे पनि त होइन । अर्को फिल्म बनाउने त हैसियत पनि हुँदैन ।
एक समय हरिदेवी कोइरालाले लोक गायनमा एकछत्र राज गरेकी थिइन् । पोखराबाटै नेपाली सांगीतिक फाँटमा केन्द्रलाई हाँक दिने हरिदेवी सन्देशमूलक गीत गायन तथा सिर्जनामा सक्रिय छिन् । २०४१ सालमा ‘पाइनँ खबर’ गीत रेकर्ड गरी नेपाली सांगीतिक फाँटमा उदाएकी हरिदेवी अहिलेसम्म गायनमै क्रियाशील छिन् ।